HMD Global emechaala wepụta gam akporo 10 maka Nokia 3.1 Plus | Gam akporosis
HMD Global bụ otu n'ime ndị nrụpụta na-echekarị maka iweta ụdị gam akporo ọhụrụ na ngwaọrụ ha. Site na ala ruo n'ọkwa dị elu, ọ bụ ihe iji nweta Nokia smartphones na gam akporo 10 ugbu a.
N’ọnwa ọ bụla, nke anyị na-anaghị anata ozi na mmelite nke OS kwuru eruola otu n’ime ụdị ya. Iji kwado ndị ahụ e kwuru n'elu, ndị Nokia 3.1 Plus bụ nke na-anabata ihu ọhụụ Google ọhụụ site na OTA ọhụrụ, ihe na-eme ihe dị ka izu abụọ mgbe Nokia 1 Plus, otu n’ime ngwugwu ndị kacha ewu ewu na ika ahụ, enwetala mmelite ahụ.
Ọ bụ ọzọ Juho Sarvikas, Onye Nchịkwa Ngwaahịa (CPO) nke HMD Global, onye kwupụtara mwepụta nke ngwugwu ngwa ngwa ọhụrụ nke na-agbakwunye gam akporo 10 na Nokia 3.1 Plus, smartphone nke ewepụtara na October 2018, yana okwu ndị a sụgharịrị site na Bekee na Spanish:
«Android 10 hapụ Nokia 3.1 Plus ga - amalite taa! Nweta atụmatụ ọhụrụ ugbu a ma melite ahụmịhe ekwentị gị. Isi obodo anyị maka nkọwa ndị ọzọ na nnweta na mba dị iche iche. » Edere ihe ndị a site n'akwụkwọ e mere na akaụntụ Twitter ya.
A gam akporo 10 puputara na Nokia 3.1 Plus bido taa! Nweta ugbu a atụmatụ ọhụrụ niile ma melite ahụmịhe ekwentị gị. Isi na obodo anyị maka nkọwa ndị ọzọ na nnweta na mba dị iche iche?https://t.co/TBlC3h2Mty # Android10 @nokiamobile pic.twitter.com/uZY3f2icMJ
- Juho Sarvikas (@sarvikas) Nwere ike 13, 2020
Nokia 3.1 Plus kụrụ ahịa na gam akporo 8.1 Oreo na mbụ. Ọ nweela mgbe ọ nwesịrị mmelite na gam akporo 9 achịcha na ugbu a gaa gam akporo 10. Onye ọ bụla ga-eche na nke ikpeazụ ga-abụ nke ikpeazụ ikpeazụ ya melite, ma ekwuru na ọnụ ahụ ga-enwerịrị ike ịnweta gam akporo 11, ozugbo ọ bịarutere n'ụzọ doro anya na ọnwa ndị na-esote afọ a.
Ọ bụrụ na nke a mee, HMD Global ga-akụzi nnukwu nkuzi nye ndị nrụpụta ndị ọzọ na-egbu oge ma ọ bụ, nke ka njọ, enyeghị ụfọdụ mmelite kachasị na ụfọdụ ekwentị ha. N'otu aka ahụ, HMD Global bụbu ihe atụ na ụlọ ọrụ mgbe a bịara na mmelite ngwa ngwa. Nke a bụ ihe Finn na-etu ọnụ nke ọma.
N'aka nke ọzọ, Nwelite 10 nke gam akporo a bu 1.24GB ọ na-abịa na gam akporo nche patch nke kwekọrọ na ọnwa Eprel. A na-atụ anya mmelite ahụ gaa na 10% nke ngwaọrụ taa, 50% site na May 16, na 100% site na May 18. Mgbe May 18 ga-agbasasịrịrị ụwa niile maka nkeji niile.
Icheta, Nokia 3.1 Plus bụ ekwentị mkpanaaka nwere obere atụmatụ. Nke a nwere ihuenyo teknụzụ IPS LCD nke tụrụ 6.0 sentimita asatọ na diagonally, nke a na-ejide ya site n'oge a, nke anyị na-ahụghị ọkwa ọ bụla, ụdị mpempe akwụkwọ ma ọ bụ perforation na ihuenyo ahụ, mana, kama nke ahụ, nnukwu oke na okpokolo agba na ala di warara.
Mkpebi mepụtara panel nke ihe nlere a bụ HD + nke pikselụ 720 x 1,440, nke na-eme usoro 18: 9 anaghịzi ahụ anya na mobiles ọhụrụ na-ekwu "ugbu a". Gbakwunye na eziokwu ahụ bụ na a na-etinye chipset Mediatek Helio P22 n'okpuru mkpuchi nke ekwentị yana 2/3 GB RAM na 16/32 GB ohere dị n'ime. Anyị na-ahụkwa batrị nke na-etu ọnụ maka ikike 3,500 mAh na teknụzụ maka 10 W na-akwụ ụgwọ.
Usoro igwefoto anyị na-ahụ na Nokia 3.1 Plus bụ okpukpu abụọ, nke a na-ahụkarị n'oge ahụ. Na ajụjụ, ihe mmetụta 13 MP bụ isi, yana oghere MP nke 5 maka ọnọdụ bokeh mode na-adịghị mma, dị na ntanetị n'usoro na mkpuchi azụ, dị elu karịa onye na-agụ akara mkpịsị aka.
Igwefoto dị n'ihu, nke raara onwe ya nye iji selfies, ịkpọ oku vidiyo, mmata ihu na ihe ndị ọzọ, nwere mkpebi nke 8 megapixels, n'otu oge ahụ a na-enye akụkụ na ibu nke Nokia 3.1 Plus dị ka 156.9 x 76.4 x 8.2 mm na 180 gram, n'otu n'otu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » HMD Global emechaala wepụta gam akporo 10 maka Nokia 3.1 Plus
Ihe 3 iji zụta Poco F2 Pro